देवदहमा ७४.०५ प्रतिशत मतदाताद्धारा मतदान
बैशाख ३१ । नेपालभर स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । रुपन्देहीको देवदहमा पनि सभ्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । देवदहमा कुल ४८ हजार २ सय ९१ मतदाता थिएभने ३६ हजार २० जना मतदाताले मात्र मतदान गरेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय देवदहले जनाएको छ । देवदहमा कुल १३ वटा निर्वाचन केन्द्र र ५४ मतदान स्थलबाट ७४.०५ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेका छन् ।
देबदह नगरपालिका वडा नं.१ मा कुल ३ हजार ३ सय ४० मतदाता थिए तर २ हजार ५सय ९२ जनाले मतदान गरेका छन् ।
देवदह नगरपालिका वडा नं. २ मा ३ हजार १ सय ९३ मतदातामध्ये २ हजार २ सय ३३ मतदान भएको थियो ।
देवदह नगरपालिका वडा नं.३ मा ३ हजार २ सय ८१ म्तदाता भएपनि २ हजार ५ सय २७ मतदाताले मतदानमा सहभागिता जनाएका थिए ।
देबदह नगरपालिका वडा नं.४ मा करल ३ हजार ५ सय ९७ मतदाता भएपनि २ अजार ७ सय ७८ मतदाताले मताधिकारको प्रयोग गरेका छन् । त्यस्तैगरी देबदह नगरपालिका वडा नं.५ मा मतदाता संख्या ५ हजार ६ सय ८० भएपनि ४ हजार ६ जनाले मतदान गरेका थिए ।
देबदह नगरपालिका वडा नं.६ मा मतदाता संख्या ३ हजार ३ सय ३० थियो जसमध्ये २ हजार ४ सय ५ जनले मतदान गरेका थिए ।
देबदह नगरपालिका वडा नं.७ मा मतदाता संख्या ५ हजार ४ सय ५३ थियो भने ३ हजार ८ सय ५६ मतदाता मतदानमा सहभागी भएका थिए । त्यस्तैगरी ३ हजार ६ सय ३३ मतदाता रहेको देबदह नगरपालिका वडा नं. ८ मा २ हजार ६ सय ४४ मत खसेको थियो ।
देवदह वडा नं. ९ मा मतदाता संख्या ४ हजार ५ भएपनि २ हजार ९सय २८ जनामात्र मतदानमा उपस्थित भएका थिए । त्यस्तै मतदाता संख्या ५ हजार ५सय ३६ भएको देवदह वडा नं.१० मा कुल ४ हजार २ सय ४१ म्तदान भएको थियो । त्यसतैगरी देवदह ११ मा ३ हजार ७ सय ४७ मतदाता भएपनि ३ हजार १४ मतमात्र खसेको थियो ।
देवदह १२ मा भने कुल २ हजार ७ सय २६ मत खसेको छ । वडा नं. १२ मा मतदाता कुल मतदाता संख्या ३ हजार ४ सय ९७ थियो ।